चिनीको अभाव भयो भन्नेलाई बोराका बोरा जीउमा हालेर पठाईदिन्छौं : मन्त्री यादव « News24 : Premium News Channel
चिनीको अभाव भयो भन्नेलाई बोराका बोरा जीउमा हालेर पठाईदिन्छौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं, २१ असोज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवले अहिले चिनीको अभाव नभएको र बजार भाउपनि नबढेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
आइतबार राजधानीमा साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा आवश्यक सामग्री खोज्नु स्वभाविक भएको बताउँदै अहिले चिनीको कुनै अभाव नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बजारमा चिनीको कुनै अभाव नभएको र, बजार भाउ पनि नबढेको दावी गर्नुभयो ।
साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले पत्रकारहरुले चिनीको अभाव भयो भनेर समाचार लेखेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो‘चिनीको अभाव छ भनेर समाचार लेख्नेहरुलाई कति चाहियो ? चिनीको बोरा नै जीउमा हालेर पठाईदिन्छौं । त्यसैले अनर्गल प्रचार गर्नुहुँदैन् । यस्तो अनर्गल प्रचारले देश कहिल्यै बन्दैन् ।’ यादवले बजारमा कुनै मुल्यवृद्धि नभएको भन्दै ढुक्क हुन सबैलई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो‘हामी अहिले अनुगमन गरिरहेका छौं । बजार अनुगमन गरिएन भनेर भनिएको छ । भोलि सोमबार गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन र हाम्रो मन्त्रालयबीच आपसी छलफल छ । हामी एउटा बलियो संयन्त्र बनाएर काठमाडौंमा मात्रै होईन, पुरै देशमा बजार अनुगमन गर्छौं।’ यद्धपी उहाँले भन्ने बित्तिकै छु मन्तर नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । यादवले भन्नुभयो,‘विगतमा सरकार थिएन, तर अहिले हामी बजारमा पुगिरहेका छौं । बजार अनुगमन गर्न हाम्रो निरन्तर प्रयास छ।’
मन्त्री यादवले चिनी आयात बढाउन एक अर्ब ६९ करोडको चलखेल भएको भनेर आरोप लगाएको प्रति प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो,‘अहिलेको जमानामा त्यति सजिलो छ र ? यत्रो पैसा चलखेल गर्नलाई, ट्रकबिना त्यत्रो पैसा चल्दैन् । जीपमा बोकेर हुँदैन् । एउटा ट्रकलेमात्रै पनि हुँदैन् । त्यत्रो पैसा बोक्न दुई वटा ट्रक चाहिन्छ। अर्बोंको कारोबार हुँदा बैंकमा थाहा हुन्छ नि। यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्यो भनेर सभामुखलाई मैले पत्रपनि लेखेको छु।’
उहाँले पत्रकारहरुलाई न्युज लेख्दा आफ्नो भ्युज नघुसाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले फरक प्रसँगमा चिनीको मुल्य सार्वजनिक लेखा समितिले निर्धारण गरेको विषयप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,‘यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार कतिको हो ? मलाई थाहा छैन । लेखा समितिले सबै वस्तुको भाउ लेखेर दिए हामीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने थिएन । यो रेटमा बेच्नुहोला भनेर हामी माईकीङ गराउँछौं ।’
मन्त्री यादवले चाडपर्वको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी, अनियमितता, कृत्रिम अभाव र मुल्य वृद्धि गरेको थाहा पाए तुरुन्त आफूहरुलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै डिजी योगेन्द्र गौचनको मोवाईल नम्बर ९८२३–२३७५८८ पत्रकारहरुलाई टिपाउनु भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक माउन्टेन गाईडको ‘ब्रिज कोर्स’ सुरु
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक माउन्टेन गाईड सर्टिफिकेसनको इन्टरनेसनल्ली ‘ब्रिज कोर्स’ सुरु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाउनेमा यति एयरलाइन्स पनि थपियो
काठमाडौँ । यति एयरलाइन्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति (एओसी) पाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित
काठमाडौँ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बाँडफाँट गरेको